Iyo yechipiri beta ye macOS Sierra 10.12.3 yatove mumaoko evanogadzira | Ndinobva mac
Sezvo neyechipiri vhezheni yeIOS 10.1.2, Apple ichangobva kuburitsa kune vanogadzira yechipiri beta vhezheni yeMac inoshanda system macos Sierra 10.12.3. Pachiitiko ichi uye senge mushanduro yakaburitswa mazuva matanhatu apfuura, vakomana vanobva kuCupertino havaratidze tsananguro yeshanduko kana zvimwe zvingangoita zvitsva zvinowedzerwa kwazviri, kunze kweiyo chaiyo bug uye kugadzirisana kwekugadzirisa. Apple inoenderera mberi kuburitsa shanduro nyowani dzeOS yayo vhiki rega rega uye zvinokwanisika kuti pakati pevhiki rino nevhiki rinouya tichaona kumira zvishoma pane izvi nekuda kwetemusoro wezororo reKisimusi.
Chero zvazvingaitika, shanduko dzinoitwa mushanduro idzi hadzinyatso kuoneka maererano nenhau dzemushandisi, izvo hazvireve kuti ivo havana kukosha, asi mushandisi anofarira kuona shanduko ine simba uye idzi beta hadzisi chaiyo yekuratidzwa kwenhau. Ngazvive sezvazvingaite, ivo vanogadzira vanogona kutowana iwo mavhezheni matsva pawebhu akakumikidzwa kwavari uye kana zvikaitika kuti nhau dzakasarudzika dzinozoonekwa isu tichazviburitsa pawebhu.
Tichakamirira vhezheni yekupedzisira iyo yavakabvisa kubva kuWOSOS nekuda kwekugadzikana nyaya, asi Apple inoita kunge yakanganwa kuti inofanirwa kuburitsa iyo nyowani vhezheni. Isu tinofungidzira kuti gore risati rapera ichave ichiwanikwa kune vese vashandisi veApple Watch, asi chakanakisa ndechekuti havamhanye uye vaite zvinhu nemazvo nekuti kutadza kwaive kwakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Iyo yechipiri beta ye macOS Sierra 10.12.3 yatove mumaoko evanogadzira